I-Kilmihil's Cozy Farm Apartment - I-Airbnb
I-Kilmihil's Cozy Farm Apartment
Clare, County Clare, i-Ireland
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Renae
Ifulethi le-Studio elinendawo ehlukile yokuhlala / yasekhishini, elisepulazini lasemakhaya elinemibono emihle yeWest Clare. Ukungena kwangasese kwehlukene nendlu enkulu yabasingathi. Kuthule kakhulu, impahla yesimanje emisha, ikhishi elihlome ngokuphelele. Ukuhamba okuhle / ukuhamba ngebhayisikili, i-15km ukuya ogwini, imizuzu emi-5 ukuya e-Kilmihil village pubs/shops, 25km to Ennis. Ababungazi abalungele umndeni, itiye/ikhofi namabhisikidi lapho ufika. Ifanele abantu abadala abangu-2, izingane ezincane ezi-1 kuya kweziyi-2 - kufakwe umbhede osofa/umbhede wezingane / isitulo esiphezulu kanye neqapha lengane uma kuceliwe.
Ifulethi lingelesimanje elinayo yonke impahla emisha. Ukuzizwa okunethezekile/okusekhaya, i-Wi-Fi esheshayo, i-TV, ukufudumeza kukagesi kanye neshawa kagesi. Ukuziphekela Kuphela, sicela uqaphele ukuthi ibhulakufesi alinikeziwe.
4.87 · 99 okushiwo abanye
Sitholakala emaphandleni amahle amahle emgwaqeni wasemaphandleni othule, akukho zimoto ezinkulu, amathrekhi okuhamba ngezinyawo, amathrekhi wamabhayisikili, amagquma, amahlathi kanye ne-bog. I-Wild Atlantic Way edumile iseduze kwethu ukuze sihlole ubuhle be-West Clare.
We are a young family from a farming background in West Clare, we love travelling together, site seeing and the great outdoors.
Ababungazi bayatholakala ukuze basize izihambeli ngemibuzo nezincomo zokuhamba endaweni. Izincwajana zezivakashi namamephu lapho ufika.